Ndị ọchụnta ego n'Africa? Tinye maka Africa Accelerator Africa 2021 (USD $ 5,000 Grant)
Onye ọchụnta ego n'Africa? Tinye maka Ala Accelerator Africa 2021 (USD $ 5,000 Grant)
Ebe E Si Nweta: fledge.co
A na-akpọ ndị ọchụnta ego n'Africa ka ha tinye akwụkwọ maka nke atọ kwa afọ Ala Accelerator Afrika 2021.
Banyere usoro ihe omume
Amalitere na 2018 site na World Resources Institute (WRI), Land Accelerator Africa, bụ mmemme izizi na nkụzi nke ụwa nke na-elekwasị anya azụmaahịa ndị na-elekwasị anya na imeju oke ọhịa, ala ubi na ịta ahịhịa.
Na nkwado nke ebumnuche AFR100 nke iweghachite ala hectare 100 site na 2030, Land Accelerator na-akwadebe ndị ọchụnta ego n'ofe Afrịka ọzụzụ dị mkpa, nkuzi, na ohere ịkparịta ụka, na ebe obibi iji wulite akụkọ ha na ịkọ nkọ.
Ndi sonyere na ya wepu aka na mmemme a ka ha wee nwee ike ijikọ ha na ndị nwere ike itinye ego ka ha nwee ike iburu azụmahịa ha gaa n'ọzọ na-esote uto Kemgbe ọ malitere, mmemme a adọtala ihe ruru mmadụ 700 na-enyocha n'Africa.
Ndị okenye ya na-akọ na ha mepụtala ọrụ 2,200, soro ndị ọrụ ugbo 56,000 rụọ ọrụ, weghachite hekta 38,000, wee too osisi nde X.
Maka mbipụta a, WRI na ndị mmekọ ya na Fledge na AFR100 na-abịakwute mmemme ahụ na Ala Osooso Africa site na akụkụ ọzọ. N'afọ a, ọnụ ọgụgụ ndị agha 2021 agbasaala.
A ga - ahọrọ 100 ndị ọchụnta ego pụtara ìhè site na Sub-Sahara Africa ka ha sonye na azụmaahịa azụmaahịa niile.
Ndị 100 kacha elu ga-enweta:
Ọnwa 3 nke ọzụzụ a na-enwe kwa izu site n'aka ndị ọkachamara;
Ọnwa 3 nke nnweta nkuzi nkuzi nke Fledge maka mmalite;
Ndebiri imepụta ọdịnaya iji nyere azụmahịa ha aka ito;
Oge ọ bụla n’ọrụ ọfịs ha na ndị ndụmọdụ ga-agbazinye ha ọrụ;
Izu ụka izu ụka kwa izu iji rụkọta ọrụ ma mụta ihe n'aka ndị ọchụnta ego ndị ọzọ na ndị otu gị.
Ndi oru 100 nke di elu nwere ohere itinye akwukwo maka ntinye ego nke Land Accelerator, nke ndi okacha amara nyere ndi oru iri.
Ndị natara ngwugwu ego ahụ na-erite uru site na
Onyinye ohuru $ 5,000;
Nzukọ nzuko na onye na-ahazi Land Accelerator iji zụlite atụmatụ itinye ego gị na atụmatụ onyinye ọhụụ;
Oge nnọkọ otu 90 nke ndị otu na Landor Accelerator mentor network, ndị ga-enye nzaghachi ahaziri iche;
Ohere iji gosipụta oge azụmahịa gị nke 3 nkeji na nke ngosi ngosi ihe ngosi nke ala Land Accelerator, ihe omume nke na-eme ka ndị 10 na ndị ọchụnta ego na ndị na-elekọta mmadụ si na kọntinent ahụ jikọọ ọnụ.
Ntinye mechie na Wednesde, Machị 31, 2021. Tinye Ebe a ọ bụrụ na ị nwere mmasị.